Gbasara Anyị - Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd.
Skmụta Nkà Gị
Nye Ihe Ngwọta Kacha Mma
Anyị Nwere More Than 19+ Afọ nke ahụmahụ na mejupụtara Materials Research na Development
Ngwaahịa ndị bụ nkọwa dị iche iche nke nduzi nduzi carbon, eriri eriri eriri, eriri eriri carbon, nnukwu tubes buru ibu na nke mejupụtara, eriri mpi, eriri carbon, na ogwe osisi na-akwụsị. Isi ngwaahịa bụ carbon fiber tube technology nnyocha na mmepe; Nhazi na ire nke carbon fiber ọkpọkọ; Mbubata na mbupụ nke ngwongwo na teknụzụ n'ime oke nke ntinye akwụkwọ.
Ike priselọ ọrụ
Anyị niile na-enye ndị ahịa ezi ngwaahịa na nkwado teknụzụ, yana ọrụ mgbe ahịa gachara.
Companylọ ọrụ anyị nwere ike imepụta nnukwu ihe mejupụtara, eriri carbon ma ọ bụ ọkpọkọ ọkpọ iko na dayameta nke 500mm na ogologo nke 20 mita, na ọkpọkọ obe ndị ọzọ dị ogologo.
Enwere ike ịmepụta mmepụta dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Kemgbe ntọala ya, ụlọ ọrụ ahụ enwetawo aha ọma site n'aka ndị ahịa na aha ọma ya na mma ya. The ụlọ ọrụ na-ewe ọkachamara mmepe dị ka nduzi, elu-edu ngwaahịa na ọrụ dị ka nzube, na-egbo mkpa nke ndị ahịa dị ka ihe mgbaru ọsọ, iji nweta ogologo oge mmepe na tonic. Anyi ga na-emekwa ndoro-ndoro anya nke aka oru aka, anyi ga-aghazikwa maka ndi oru iga ebe di iche-iche imuta ihe ma bia.
Okwu ahia: FOB, CFR, CIF
Usoro nke Paykwụ :gwọ: LC, T / T, D / P, PayPal, Western Union,
Nkezi Oge Oge: n’ime ụbọchị iri na ise
Onu ogugu ndi ahia ahia: 5-10
Mbupụ Afọ: Kemgbe 2013
Pasent Pasent: 25% -30%
Main ahịa: North America, South America, Eastern Europe, Asia, Africa, Western Europe
Ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso: Qingdao
Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na ịmepụta nkọwa dị iche iche nke ọkpọkọ mejupụtara. Anyị nwere ihe karịrị afọ iri nke mmepụta ahụmahụ na professionally iburu OEM oru ngo. N'ezie, anyị na-emekwa okporo osisi ịkụ azụ n'otu oge. Ọ bụrụ na ị nye anyị ohere ịkwado gị, ị ga-enweta ọrụ kachasị mma na ogo ngwaahịa kacha mma.
Iji mezuo nke a, anyị ji obi ụtọ na-anabata ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie sitere na ụdị ndụ niile ị gara ma duzie.